Al-Qaacida waa urur iyo dhaqdhaqaaq haybo badan, wuxuu abuurmay 1988 ilaa 1989kii iyo horaantii 1990, wuxuu ku baaqaa Jihaad Caalami ah, haatan waxa uu ku badanyahay xarunna u ah wadanka yemem, gaar ahaan gobolada qabiilooyinka koonfurta oo ah dhul buuro leh, kuwaas oo loo yaqaan alqaacidada jasiirada carbeed.
ururka ayaa hawlo badan qabsaday weeraro waaweyna la beegsaday yoolal shacab iyo mid ciidamba oo ku kala yaalla daafaha aduunka , haba ugu caansanato weerarkii 11 sebeteembar ee saraha dhaadheer ee maraykanka lagu qaaday , hogaankooda waxoo ahaa Usaama bin Laadin, waxaana ciidamada Mareykanka ee ku dileen dalka Bakistaan. Al-Qaacida waa urur qaraxyo badan ka fuliyay wadamo badan oo caalamka ah, sida Mareykanka, Turki,Kenya,Soomaaliya,Yemen,Tansaaniya iyo meelo badan]].Al-shabaab waxey la xiriirtaa Al-qaacida, Waa urur is qarxiyo oo aaminsan fikrada al.qaacida.
Alqaacida waa urur arkakaxiso ah oo wahaab ah.Waxeena aaminsanyihiin fikrada ee ka qabaan diintooda islaamka.Al-qaacida waxa la'aasasay sanadii 1988. waxa ay kubaaqdaa Jihaad caalamiya hada waxa ay aad u dagantahay Yaman waxa ay gaysatay weeraro aad u badan oo ay ugu wayntahay weerarkii 11- sibteenbar 2001 weerarkaasi waxa uu kadanbeeyay in dawlada maraykanku ay qaado dagaal ay kumagacawday ladagaalanka argagixisada. waxa laguyaqaanaa alqaacida in ay isticmaasho weerarada isbiimaynta ah iyo weerarada ama qaraxyada iskumarka kadhaca meelo kala duwan. alqaacida waxa ay markasta ku andacootaa in ay beegsanayso goobo ay joogaan xoogag ajanabi ah oo dhulka islaamka kusoo duulay.ururka alqaacida waxa ay rabaan in caalamka islaamka ay kasameeyaan dawlad islaamiya oo fakarkooda kusocota. amaba waxa looyaqaano (khilaafa al-isklaamiya)waxa ay uragtaa alqaacida in uu jiro iskaashi amaba gaashaan buur kiristan ah oo kusoo duushay ciida islaamka waxa kale oo alqaacida ay wax caadiya u argtaa oo ay xalaashatay cidii ku dhimata qaraxyada ay gaystaan xataa hadii goobtaa dad islaam ah oo aan waxba gaysani ay kujiraan.